इलामका नरेन्द्र मगर (वेटर)को हातमा १ किलो सुन ! – ebaglung.com
इलामका नरेन्द्र मगर (वेटर)को हातमा १ किलो सुन !
२०७५ श्रावण १२, शनिबार १९:२८	Top News, थप समाचार
राम प्रसाद ढुङेल, युएई २०७५ साउन १२ । रोजगारीका लागि युएईमा रहेका इलामका नरेन्द्र मगरलाई युएईको लोकप्रिय रेमिट्यान्स कम्पनी अहालिया एक्सचेञ्जले १ किलो सुन हस्तान्तरण गरेको छ । एक्सचेञ्जको बर दुबई शाखामा साउन १० गते विहिबार एक कार्यक्रम आयोजना गरेर उक्त सुन मगरलाई प्रदान गरिएको अहालिया एक्सचेञ्जका नेपाली व्यापार प्रमुख बेनिमाधव ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
समर सरप्राइज९२०१८ उपहार योजना अन्तर्गत भाग्यशाली ग्राहक बन्न सफल मगरले उक्त सुन गोलाप्रथाबाट हात पारेका हुन् । मगरले गत जून १२ तारिख अल अहालिया एक्सचेञ्जको बर दुबई शाखाबाट पढाइ खर्च स्वरुप बिर्तामोड झापामा अध्ययनरत आफ्नी बहिनी अनुसा थापा मगरलाई बीस हजार रुपैयाँ पठाएका थिए । विर्तामोड झापाको कन्काई कलेजमा स्नातक अन्तिम वर्षको अध्ययन गरिरहेकी बहिनीलाई पठाएको त्यही पैसाको कारण मगरले करिब ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन उपहार प्राप्त गरेका छन् । मगरले अहालिया एक्सचेञ्जकै रहोवरमा उक्त सुन युएईमा बिक्री गरेर रकम नेपाल लैजाने बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका इलामको जमुना९४ बाट दुबईको ट्रान्सगार्ड कम्पनीमा क्याटिरङ विभागमा वेटरको काम गर्न आएका गरिब परिवारका २५ वर्षका अविवाहित मगर आफुले दुईचार पैसाको लोभ नगरी नियमित रूपमा आधिकारिक एक्सचेञ्ज कम्पनीबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको र एक किलो सुन पाउँदा शुरुमा पत्याउन गाह्रो परेको बताए ।
उपहार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मगरले युएईमा कार्यरत सबै नेपालीलाई वैधानिक तरिकाले नेपालमा पैसा पठाएमा देशलाई र व्यक्ती स्वयंलाई फाइदा पुग्ने बताए । अहालिया एक्सचेञ्जलाई चौतर्फी हितको शुभकामना दिदै मगरले पुरस्कार स्वरुप पाएको पैसाले जीवन निर्वाहका लागि सहयोग पुग्ने बताए । गत १६ जून देखि १४ जुलाईसम्म उक्त एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाएका सबै ग्राहकमध्ये बाट मगर गोलाप्रथाबाट उक्त पुरस्कार पाउने भाग्यमानी ग्राहक बनेका हुन् । गत जुलाई १५ तारिख अहालिया एक्सचेञ्जको अबुधाबीमा रहेको इलेक्ट्रा शाखामा उक्त बिजेता घोषणा गरिएको हो । यसका अतिरिक्त समर सरप्राइज कार्यक्रम अन्तर्गत माइक्रोओभन, एलइडि टिभी, घडी, किरिङ, पेन र मग लगायतका अन्य उपहार सामग्री पनि धेरै ग्राहकले पाएका थिए ।
सस्तो सेवा शुल्कमा भरपर्दो सेवा र अन्य एक्सचेञ्जभन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो रेटमा रकम पठाउन सकिने भएका कारण धेरै नेपालीको रोजाइमा अहलिया एक्सचेञ्ज रहेको अहालिया एक्सचेञ्जका हेड अफ अपरेसन कमल सुब्बाले जानकारी दिएका छन् । उपहार हस्तान्तरण कार्यक्रममा अहालिया एक्सचेञ्ज युएईका एसोसिएट डाइरेक्टर मिस्टर महमुद, जिएम भिभी सुव्रमन्यम, प्रशासनिक व्यवस्थापक सलमान खालिद, हेड अफ अपरेसन कमल सुब्बा,मार्केटिङ म्यानेजर सन्तोष नायर लगायत अहालिया एक्सचेञ्जमा कार्यरत अन्य कर्मचारी र युएईको नेपाली समुदायका अगुवा साथै सर्वसाधारण नेपालीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको नेपाली बिजनेस प्रमुख बेनिमाधव ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
पहिरोका कारण गुल्मीको मुसिकोट थाममा २ घर विस्थापित, दर्जनौ घर जोखिममा
ज्युँदै सधैका लागि बिदा माग्दै,आफ्नो कात्रो आफै किन्दै …